ရှန်တီစေတီတော် - ဝီကီပီးဒီးယား
34°10′25″N 77°34′29″E﻿ / ﻿34.17361°N 77.57472°E﻿ / 34.17361; 77.57472ကိုဩဒိနိတ်: 34°10′25″N 77°34′29″E﻿ / ﻿34.17361°N 77.57472°E﻿ / 34.17361; 77.57472
Ladakh Shanti Stupa Committee under Bhikshu Gyomyo Nakamura[ကိုးကားချက်လိုသည်]
ရှန်တီစေတီတော် သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ Ladakh, Leh ခရိုင်, Chanspa ရှိ‌ တောင်ကုန်းထိပ်တွင် တည်ရှိသည့် အဖြူရောင်အမိုးခုံးပုံစံ စေတီတော်တစ်ဆူ ဖြစ်သည်။ စေတီတော်ကို ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်း Gyomyo Nakamura က ငြိမ်းချမ်းရေးဘုရားတည်ဆောက်ရေးရည်ရွယ်ချက်၏ တစိတ်တဒေသအဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ စေတီတော်၏ အောက်ခြေတွင် ဗုဒ္ဓ၏ ဓာတ်တော်ကို ထားရှိပြီး ထိုဓာတ်တော်ကို ၁၄ ယောက်မြောက် ဒလိုင်းလားမားက ဌာပနာခဲ့သည်။ စေတီတော်သည် ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် နယ်မြေတစ်ခုအဖြစ်သာမက ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြင်ကွင်းကျယ်ကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်သဖြင့်လည်း လာရောက်လည်ပတ်သူများကို စွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။
၂ ဖော်ပြချက်နှင့် အသွင်အပြင်
၃ ခရီးသွား ဆွဲဆောင်မှု
ရှန်တီစေတီတော်ကို ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့် Ladakh ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက တည်ခဲ့သည်။ စေတီတော် တည်ထားကိုးကွယ်ရန် မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုမူ Nichidatsu Fujii (Fujii Guruji) က ၁၉၁၄ ခုနှစ်တွင် ရရှိခဲ့သည်။ Nichidatsu Fujii ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးစေတီနှင့် ကျောင်းတော်များ တည်ထားရန်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာအား ပြန်လည်၍ ထွန်းကားလာစေရန် ဖြစ်သည်။
၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် Bhikshu Gyomyo Nakamura နှင့် နယူးဒေလီမှ Ladakh လားမား ဖြစ်သည့် Kushok Bakula(လားမား - တိဘက်တရားဆရာ) တို့၏ ညွှန်ကြားမှုဖြင့် စေတီတော်တည်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို စတင်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းတည်ဆောက်ရာတွင် Ladakhi ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၊ ပရဟိတလူမှုဝန်ထမ်းများနှင့် ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ လှူဒါန်းပါဝင်မှုများဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ် Indira Gandhi က စေတီတော်သို့ ယာဉ်ဖြင့်သွားလာနိုင်မည့်လမ်း တည်ဆောက်ရန် ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ပြည်နယ်အစိုးရသည်လည်း ရှန်တီစေတီတော်တည်ထားရာတွင် ငွေကြေးကူညီမှုအချို့ကို ပြုလုပ်ပေးခဲ့သည်။ ၁၄ ယောက်မြောက်နှင့် ယခုလက်ရှီ ဒလိုင်းလားမားဖြစ်သည့် Tenzin Gyatso သည် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် စေတီတော်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
ယခုလက်ရှိ ဒလိုင်းလားမားက စေတီတော်၏ အောက်ခြေတွင် ဗုဒ္ဓ၏ ဓာတ်တော်များကို ဌာပနာခဲ့သည်။ စေတီတော်ကို အဆင့်နှစ်ဆင့်ပါသည့် ပုံစံဖြင့် တည်ထားသည်။ ပထမအဆင့်တွင် ဓမ္မစကြာစက်ဝိုင်းနှင့် တစ်ဖက်တချက်စီတွင် သမင်တစ်ကောင်စီထားရှိကာ ပုံဖော်ထားသည်။ အဓိကဖြစ်သည့် ရွှေရုပ်ပွားတော်ကြီးကို ဓမ္မစကြာစက်ဝိုင်းပေါ်တွင် ထားရှိသည်။ ဒုတိယအဆင့်တွင် ဗုဒ္ဓ ဖွားတော်မူခြင်း၊ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်း၊ မာရ်နတ်ကို အောင်နိုင်ခြင်း စသည်တို့ကို ပန်းချီရေးဆွဲထားသည်။ အဆင့်နှစ်ခုစလုံးတွင် ဗုဒ္ဓတရားအားထုတ်နေဟန် သေးငယ်သည့် ပုံဖော်မှုများစွာကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။
စေတီတော်ကို ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးကို နှိုးဆော်သည့်အနေနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာနှစ် ၂၅၀၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် တည်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် စေတီတော်သည် ဂျပန်နှင့် Ladakh ပြည်သူများအကြား ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှု၏ အမှတ်သင်္ကေတတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
စေတီတော်ကို ဖွင့်လှစ်ကတည်းကပင် ရှန်တီစေတီသည် ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်ရာနေရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ထုတ်ဝေသည့် သတင်းစာဖြစ်သည့် The Hindu အရ စေတီတော်သည် Leh ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်၌ ခရီးသွားများကိ အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံး ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုခဲ့သည်။ စေတီတော်၏ ဗိသုကာလက်ရာပုံစံသည်လည်း Ladakhi ပုံစံနှင့် ကွဲပြားခြားနားသည်။ စေတီတော်မှ Leh မြို့ကို အပေါ်စီးမှ မြင်ကွင်းကျယ်ကြည်ရှုနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ တောင်များဝန်းရံပတ်လည်ကာ တည်ရှိနေသည့် Changspa, Namgyal Tsemo ကျေးရွာများကိုလည်း ကြည့်ရှုခံစားနိုင်သေးသည်။ နေထွက်နေဝင် ရှုခင်းများသည် စေတီတော်မှ ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးသော မြင်ကွင်များလည်း ဖြစ်သည်။ စေတီတော်ကို ညအခါတွင် မီးအလင်းရောင်များဖြင့် ပူဇော်ထားသည်။ စေတီတော်ကို ခရီးသွားများအတွက် မနက် ၅ နာရီမှ ည ၉ နာရီအထိ ဖွင့်လှစ်ထားသည်။
စေတီတော်သည် ၃၆၀၉ မီတာ (၁၁၈၄၁ ပေ) အမြင့်တွင် တည်ရှိပြီး Leh နန်းတော်နှင့် မျက်နှာချင်းမူနေသည့် မြင့်မားသည့် တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ Leh (ယခင်က Ladakh မြို့တော်) မှ ၅ ကီလိုမီတာ (၃.၁ မိုင်) အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ စေတီတော်သို့ ကားလမ်းမှဖြစ်စေ အမြင့်သို့ ခြေလှမ်းငါးရာ လမ်းလျှောက်၍ ဖြစ်စေ တောင်ကုန်းထိပ်သို့ တက်ရောက်နိုင်သည်။
ရှန်တီစေတီတော်ကဲ့သို့ ဆင်တူသည့် စေတီတော်ကို Kale khan အနီး နယူးဒေလီတွင်လည်း တည်ထားသည်။
↑ Leh။ NDTV။
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ Bhasin, Sanjeev Kumar (2006). "Shanti Stupa", Amazing land Ladakh: places, people, and culture. Indus Publishing, 119–20. ISBN 978-81-7387-186-3။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Shanti Stupa။ Buddhist-temples.com။ 19 October 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ Jagir Singh Bajwa, Ravinder Kaur (2007). Tourism Management. APH Publishing, 117. ISBN 978-81-313-0047-3။
↑ Luv Puri။ "Ladakh monuments cry for renovation"၊ The Hindu၊ 21 August 2005။ 1 December 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Frommer's India. Hoboken, NJ, USA: Wiley Publishing Inc., 524. ISBN 978-0-470-16908-7။
↑ Leh: Places to see။ VISITLADAKH.COM။ 1 December 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၈.၀ ၈.၁ Shanti Stupa။ Buddhist-Tourism.Com (2007)။ 1 December 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှန်တီစေတီတော်&oldid=550658" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။